ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ သိထားသင့်သော အချက်များ - Chit MayMay
Home Mom and Baby ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ သိထားသင့်သော အချက်များ
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်တဲ့ သိထားသင့်သော အချက်များ
ကူးစက်မှုတွေ အရမ်းများနေတဲ့ ယခုလို ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့အနေနဲ့ စိတ်ပူနေရပြီး မေးခွန်းများစွာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် မိခင်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သော်လည်း စိုးရိမ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အဖြေအနည်းငယ်ရှိနေပါသေးတယ်။ ယခုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင် မေမေတို့ ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ ကလေးကို ကူးစက်နိုင်သလား?
ငါ့မှာရောဂါပိုးရှိနေရင် ငါ့ကလေးကို ကူးစက်နိုင်မလား? ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအများစုမှာရှိတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိတော့ မိခင်ဆီကနေ ဝမ်းဗိုက်ထဲက ကလေးအား ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အတည်ပြုချက်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ ယနေ့အထိ လေ့လာမှုတွေအရ ရေမွှာရည်နဲ့ မိခင်နို့ထဲမှာ active viruses တွေကို မတွေ့ရသေးပါဘူး။ လေ့လာမှုအချို့အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် မိခင်ကူးစက်ခံခဲ့ရရင် မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ antibodies တွေရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
၂။ ရောဂါကူးစက်ခံရပါက ကလေးအား နို့တိုက်လို့ရနိုင်ပါသလား?
နို့တိုက်နိုင်ပါတယ်။ မိခင်နို့က ကလေးကို အာဟာရအများဆုံး အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် မိခင်နို့က ကလေးအား ရောဂါကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ မိခင်နို့မှတဆင့် ကလေးဆီသို့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာကို စိုးရိမ်နေရင် စိတ်မပူပါနဲ့။ လေ့လာမှုများအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကိုဗစ်- ၁၉ သင် ကူးစက်ခံရရင် မိခင်နို့မှာ antibodies တွေ ပါဝင်နိုင်ကြောင်းကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒီ antibodies တွေက မိခင်နို့တိုက်နေစဉ် သင့်ကလေးဆီသို့ လွှဲပြောင်းပေးပါတယ်။
၃။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် COVID-19 ကူးစက်နိုင်ခြေများသလား?
WHO ရဲ့အဆိုအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ COVID-19 ကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ဖျားနာနိုင်ခြေ ပိုမြင့်မားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေမှာ ကိုယ်ဝန် ရင့်လာချိန် တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ်ကျော်လာချိန်မှာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကူးစက်ခံရရင် တော်တော် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်လေ့ရှိတာကြောင့် အရမ်းဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် (သို့) အိုဗာဝိတ်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ၊ အသက်ကြီးသူ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါအခံရှိသောသူတွေဟာ အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်းမှာ ရောဂါပိုးကို ခုခံအားနည်းတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်မှာ အပြောင်းအလဲများစွာကို ခံကြရပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း သင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်အပြီးမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ ရောဂါထိန်းချုပ်မှုနှင့် တားဆီးရေးစင်တာက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ- သင်ဟာ ဒီအဆင့်မှာ သွေးခဲခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင် သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက််မှာတောင် ဆက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
၄။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ COVID-19 ကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
အခြားသူတွေလိုပဲ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်၊ လက်တွေကို မှန်မှန်ဆေးပါ။ လက်သန့်ဆေးအမြဲဆောင်ထားပါ။ မလိုအပ်ဘဲ အပြင်ထွက်တာ ရှောင်ပါ။ အပြင်ထွက်ခဲ့ရင် အချိန်တိုင်း Mask ဝတ်ဆင်ပြီး လူတွေနဲ့ အနည်းဆုံး ၂မီတာအကွာအဝေးမှာနေပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေကို မသွားပါနဲ့ ။အထူးသဖြင့် သင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာကြောင့် လိုက်နာသင့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာစွာ စားပြီး ရေများများသောက်ပါ။ သင့်တော်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် လေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ပါ။ ရောဂါကူးစက်ခံရတယ်လို့ သံသယရှိရင် ဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။ စိတ်ပူပန်တာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးတာတွေ ရှိနေရင် သင့်ခင်ပွန်း (သို့) သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Previous articleသားသားမီးမီးတွေ ငိုတဲ့အခါ မိခင်ရဲ့ဦးနှောက်က ဘာဖြစ်လာသလဲ?
Next articleမိဘအများစု သူတို့သားသမီးကို ပြောမပြချင်သောအရာများ
သားသားမီးမီးတွေ ငိုတဲ့အခါ မိခင်ရဲ့ဦးနှောက်က ဘာဖြစ်လာသလဲ?